Ka jooji oo gebi ahaanba tirtir akoonkaaga WhatsApp | Wararka IPhone
Waxaa laga yaabaa inaad waligaa isku aragtay xaalad ah sabab kasta oo aad u badashay lambarkaaga taleefanka ama aad lumisay / aad uga tagtay, xaaladahaas waxa uu hawlwadeenku sameeyo waa inuu sii daayo lambarka iyo cid kale u dhiib, Qofka la yaabi doona markuu rakibayo barnaamijka fariimaha deg dega ah ee fariimaha lagu diro ee WhatsApp haddii kii hore uu ilaaway inuu tirtiro akoonkiisa (isagoo marin u leh koontadii isticmaaleha hore).
Akoonada WhatsApp ayaa kuxiran lambarka taleefanka, qofna, ama iimayl ama aalad jidh ahaaneed, tani waxay siisaa faa iidada ugu weyn ee sahlanaanta marka lagu xaqiijinayo SMS dhaqaajinta koontada oo la illaawo diiwaangelinta iyo furaha sirta ah iyo kuwa kale, laakiin sidoo kale macnaheedu waa halis qarsoodi ah oo qarsoodi ah maadaama qof kasta oo haysta lambarka taleefankaas uu heli karo dhammaan xogta ku xiran.
Si looga hortago in qofku helo WhatsApp-kaaga adiga oo helaya lambarka taleefankaaga, maanta waxaan ku tusinaynaa sida gab oo gebi ahaanba ka saar koontadaada WhatsApp dhawr talaabo oo fudud.
1 Maxay ka dhigan tahay in la tirtiro akoonkaaga WhatsApp?
3 Talaabooyinka la raacayo
Maxay ka dhigan tahay in la tirtiro akoonkaaga WhatsApp?
Xidhiidhka ka dhexeeya lambarka taleefankaaga iyo xogtaada gaarka ah ee WhatsApp (sawirka sawirka, xaaladda, sheekaysiga, faylasha faylasha badan ...) waa lagaa saari doonaa.
Habkaaga lacag bixinta ee diiwaangashan ayaa laga saari doonaa server-yada WhatsApp.
Nuqulada wada sheekaysigaaga ee lagu marti galiyay labada qalab macruufka ah iyo iCloud waa la tirtiri doonaa.
Lambarku wuxuu bilaash u noqon doonaa diiwaangelinta cusub ee WhatsApp.
Waxaa lagu talinayaa ku kaydso qalabkaaga macruufka ah gudaha Kombuyuutarkaaga PC ama MAC, tirtirka koontadaada WhatsApp sidoo kale waxay tirtiri doontaa gurmadka otomaatiga ah ee sheekooyinka ku jira iCloud iyo haddii aan waligeen dooneyno inaan dib u hawlgalno koontooyinkeenna oo aan xafidno faylalkayaga, waa inaan dalbanaa gurmadkaas gacanta ah.
Waxaan heleynaa barnaamijka WhatsApp ee lagu rakibay qalabkeena iOS oo aan fureyno (oo lagu dabaqi karo Android).
Waxaan aadeynaa qeybta Settings ee arjiga oo waxaan galnaa qeybta "Account".
Qeybta "Koontada", guji xulashada "Delete my account".
Waxaan galnaa lambarka taleefankeena si aan u xaqiijino tirtirka iyo markii uu dhammeeyo waxaan ka tirtirnaa codsiga qalabkeena (in si wax ku ool ah loo tirtiro dhammaan xogta ku kaydsan gudaha).
Iyada oo talaabooyinkan fudud koontadayada waa la tirtiri lahaa si guul leh oo qofka ku xigta ee hela lambarka taleefankaaga hadda wuxuu awood u yeelan doonaa inuu iska diiwaangeliyo adeegsade cusub oo WhatsApp ah, iyada oo aan la ilaalin wax wadahadal ah, sawir ama nooc xogta shakhsiyeed ah milkiilaha hore.
Xaaladdaani waa mid lagu dabaqi karo naftiisa, taasi waa, haddii waqti kasta oo aan dooneyno inaan dib u howlgalinno koontadayada waxaan u sameyn doonnaa sidii inaan nahay isticmaaleyaal cusub, waa inaan iska diiwaangelinnaa lambarka taleefankeenna oo aan ku kicinnaa koontada SMS si aan dib ugu bilowno ama aan uga soo kabanno dhammaan xogta kaydkii hore .
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida gebi ahaanba loo tirtiro loona joojiyo akoonkaaga WhatsApp
Dhab ahaan, tani waa aragti ahaan sida akoonka WhatsApp loo joojiyo ...
Dhibaatada ayaa ah in markaa ficil ahaan, kuwani ay sameeyaan waxa ay rabaan ... oo isla markiiba fiidmeerta, toddobaadyo ka dib markii la joojiyay koontada, si lama filaan ah dadka aad la xiriirto ayaa kuu sheegaya inaad mar kale ka soo muuqanayso barnaamijka. Waad hubineysaa, runtiina ... waad soo muuqatay ... sidii iyagoo dib uhelaya "keyd" kahor intaadan soo bixin ....
Waxay igu qaadatay wax badan inaan ugu dambayntii ka qayb galo codsiyadayda ka saarista, kuwaas oo ay fuliyeen dhawr toddobaad ka dib iyo dhawr emayl oo u hanjabaya qareennada, Hay'adda Ilaalinta Macluumaadka, iwm. WALIGAY iguma soo jawaabin, midna ... laakiin aakhirkii waxay ku dhammaadeen inay si joogto ah ii joojiyaan (sida loo maleynayo, laakiin dabcan ... yaa garanaya).
Haddii qof uu haysto iPhone oo uu yiraahdo waa inay tirtiraan akoonkiisa, ma sii wadi karaa inuu ku daro sawirkiisa sawir iyo markii aad wacdo, ma ku siinayaan ringtone?
Jawaab Adriana vazquez
WhatsApp ayaa lagu cusbooneysiiyaa horudhaca isku xidhka iyo inbadan oo dheeri ah